Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Njem nleta ndị ọzọ na Spain na Machị 2021 gbadatara 75.5% vs March 2020
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'ọnwa Ọktọba 2020, Spain weghachitere ọnọdụ mberede dị elu, nke agbatịgoro na Mee 9, 2021
Imirikiti ndị ọbịa si mba ọzọ bịara Spain na Machị si France bịa
Ndị mba ọzọ bịara eleta Spain na Machị jiri € 513 nde
Na 2020 ihe dịka nde mmadụ iri na iteghete na-eme njem nleta bịara Spain
Spainlọ Ọrụ National Statistics Institute nke Spain mara ọkwa taa na ọnụọgụ ndị ọbịa si mba ọzọ ndị gara Spain na Machị 2021 ruru obere ihe karịrị 490,000, nke bụ 75.5% pere mpe n'otu oge n'afọ gara aga.
Imirikiti ndị ọbịa si mba ọzọ bịara Spain Machị si France bịa (ihe dịka mmadụ 110,000). Ngụkọta nke ndị ala ọzọ gara Spain na March ruru nde 513, gbadata 76.4% site n'otu ọnwa na 2020.
Na 2020, n'ihi mkpọchi mkpuchi mkpuchi nke coronavirus ka etinyegoro ya, ihe ruru nde mmadụ iri na itoolu ndị njem nleta gara Spain, nke bụ 19% ihe na-erughị otu afọ tupu mgbe ahụ. Mmefu ndị njem na Spain na ọnwa 77.3 nke 12 karịrị ijeri 2020, nke bụ 19.7% na-erughị na 78.5.
Kemgbe mmalite nke ọrịa ọrịa COVID-19 na Spain, ihe karịrị nde 3.5 ka akọwara na mba ahụ, ihe karịrị mmadụ 78,700 nwụrụ. Na ngwụsị nke Ọktoba 2020, gọọmentị Spain weghachitere ọnọdụ mberede nke siri ike na mba ahụ, nke agbatịkwu ruo Mee 9, 2021.